Qisada Haweenay Mansabkii Qoyskeeda Reer Boqor Oo Ay Xil Ku Heli Lahayd Iska Diidday Kana Dooratay Jacaylkeeda - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Qisada Haweenay Mansabkii Qoyskeeda Reer Boqor Oo Ay Xil Ku Heli Lahayd...
Gabadh ka tirsan qoyska reer Boqor ee dalka Japan ayaa kala dooratay guur iyo mansab qoyskeeda boqortooyada ah ka dib markii ay sheegtay inay ka tanaasulayso darajada Amiiradda ayna doorbiday inay guursato nin caadi ah taasi oo ay ku waayayso maamuuska Boqortooyo ee ay leedahay iyo xilkii amiirad oo ay imika wixii ka dambeeya noqonayso qof caadi ah oo aan lagu xidhiidhinayn boqortooyada.
Gabadhan oo lagu magacaabo Amiirad Mako, oo 25 sano jir ah ayaa waxaa awoowe u ah boqorka dalka Japan Emperor Akihito Kei Komuro waxyna guursan doontaa Kei Komuro, oo ka shaqeeya xafiis Qareen kaasi oo ay isku da’a yihiin muddona is jeclaayeen ahna nin caadi ah oo aan isagu qoyska boqortooyada ka mid ahayn.
Amiirad Mako ayay isbarteen ninkan ay calmatay sannadkii 2012 xilligaasi oo ay isku Jaamacad dhigan jireen, waxaase seeto iyo dabar u noqday sharciga u yaal qoyska Boqortooyada oo dhigaya in haddii qof ka tirsan qoyska Boqortooyadu uu damco in uu guursado qof caadi ah ay tahay in uu iska dhigo darajada ama maaqaamka Boqortooyada.
Tallaabada ay qaadday gabadhan ayaa waxaa laga yaabaa inay dhaliso dood culus oo ku aaddan silsaladda dhaxalka boqortooyada iyadoo la filayo in boqorku uu is casilayo.
Aqalka Boqortooyada Japan ayaa u sheegay warbaahinta gudaha inay socdaan qorsheyaal ku aaddan guurka Amiiraddan yar, waxaase doonistu ay noqon doontaa mid rasmi ah marka la isdhaafsado hadyado.
Mr Komuro oo Arbacadii aan soo dhaafnay la waydiiyey arrintan wuxuu yidhi “Hadda ma aha waqtigii aan arrintan ka hadli lahaa, waxaanse hadli doonaa marka ay noqoto waqtiga munaasabka ah”.
Haa, Hadda ka hor Amiirad Mako eedadeed Amiirad Sayako ayaa sanadkii 2005-tii waxay guursatay nin ka mid ah dadka caadiga taasi oo ahayd markii ugu horreysay taariikhda boqortooyada Japan.
Arooskeeda oo ka dhacay xarun dawladdu leedahay oo ku taal magaalada Tokyo waxaa lagu tilmaamay xaflad aad u heer hooseysa, waxaana Sayako ay u dhaqmaysay si qof aad u heer hooseeya, waxayna u guurtay guri hal qol ah, iyadoo markaas bilowday inay barato sida gawaadhida loo wado, sida dukaamada looga dukaamaysto. Amiirad Sayako waxay ahayd gabadha kaliya ee uu dhalay boqor Akihito.
Boqor Akihito oo 83 sano jir ah ayaa bishii August sheegay in uu iscasilayo isagoo sidaa u yeelaya in da’diisu aanay carqalad ku noqon hawlaha boqortooyo ee dalkaasi Japaan qof ka da’ yarina uu dhaxalka la wareego.
Somaliland: Suldaan Reer Somaliland Ah Oo Ka Hadlay Xiisadda Jabuuti Iyo Eritrea U Dhexeysa